165CM High-ọkwa llọ Dollhouse 168 Mmekọahụ Mmekọahụ Zuru okè
Llọ Dollhouse afọ ojuju 168 High-ọkwa 165CM Mmekọahụ Doll
Dolmụ nwanyị na-enwe mmekọahụ bụ ihe atụ zuru oke nke otu anyị nwere ike isi mejupụta ihe efu nke ndụ. Tupu ịme nhọrọ ikpeazụ, gbaa mbọ hụ na ị ga-elele anya ma tulee ụmụ bebi dị iche iche. Nke a bụ 165lcm ogologo nwa bebi, si na Dollhouse 168 ika. Achọrọ m ka ị họrọ ngwaahịa kachasị amasị gị ebe a. Ogo nke nwa bebi ahụ dị ezigbo mkpa, n'ihi na nka a ga-egbo gị echiche dị omimi.